ထူးထူးခြားခြား စွမ်းအင် နဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ သုံးစွဲမှု အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချထားတဲ့ ကိုနေမျိုးဆေးတို့ အိမ်လေး – Shwe Naung
ထူးထူးခြားခြား စွမ်းအင် နဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ သုံးစွဲမှု အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချထားတဲ့ ကိုနေမျိုးဆေးတို့ အိမ်လေး
Shwe Thuta | November 11, 2020 | Celebrity | No Comments
ကျနော်တို့ အိမ်ဆောက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ်နှစ် ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကပါ၊ အိမ်ဆောက်ဖြစ်ရင် စွမ်းအင်နဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချတဲ့၊ စွမ်းအင်နည်းနည်းပဲသုံးတဲ့ အိမ်မျိုးဆောက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပါတယ်၊ လက်လှမ်းမီသလောက် စာအုပ်တွေဖတ်၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေအကြောင်း၊ ရာသီဥတုအကြောင်း၊ စွမ်းအင်တွေအကြောင်း၊ စွမ်းအင်တွေ လျှော့သုံးတဲ့ အိမ်တွေအကြောင်း လေ့လာခဲ့ပါတယ်၊ နားလည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၊
စွမ်းအင်လျှော့သုံးတဲ့အိမ်မျိုးတွေဟာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ တော်တော် တွင်ကျယ်နေပါပြီ၊ အခုနောက်ပိုင်း ယိုယွင်းလာတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိန်မီ ထိမ်းသိမ်းဖို့ စဉ်းစားလာကြတာပါ၊ လျှပ်စစ်တွေ လျှော့သုံးမယ်၊ ရေတွေ လျှော့သုံးမယ်၊ လောင်စာတွေ လျှော့သုံးမယ်၊ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် သဘာဝတရားကြီး မပျက်စီးရအောင် ကြိုးပမ်းမယ်၊ အဲ့လို စိတ်ကူးတွေနဲ့ပါ၊
ကျနော်တို့လည်း အဲ့ဒီ့အကြောင်းလေးသိရတော့ ကိုယ်နေမယ့် အိမ်လေးကို အဲ့လိုဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပြီး ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျနော်တို့က အိမ်ဆောက်ရင်လည်း ပစ္စည်းအဟောင်းတွေပဲ တတ်နိုင်သလောက် သုံးမယ်လို့ စဉ်းစားထားခဲ့တယ်၊ ပြတင်းပေါက်အဟောင်းတွေ၊ တံခါးအဟောင်းတွေ၊ သစ်သားအဟောင်းတွေသုံးတော့ အိမ်တွေ ထပ်ထပ်ဆောက်တိုင်း သုံးမယ့်သစ်တွေအတွက် သစ်ပင်တွေ ထပ်ခုတ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့၊ အုတ်အဟောင်းတွေ၊ ကျောက်ပြား ကြွေပြားအဟောင်းတွေသုံးတော့ အသစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ့် လောင်စာတွေ ချွေတာရာ ရောက်တာပေါ့၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အနီးအနားပါတ်ဝန်းကျင်ကရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ သုံးတော့ အဝေးနိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေထက်စာရင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့ စွမ်းအင်တွေ လောင်စာတွေ ပိုသက်သာတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ပစ္စည်းအဟောင်းတွေပဲ တတ်နိုင်သလောက် သုံးမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ၊
သုံးပြီးသားပစ္စည်းအဟောင်းတွေနဲ့ အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ ဒီပစ္စည်းတွေက လိုချင်တိုင်းဝယ်လို့မရဘဲ ကြုံကြိုက်မှသာ ရနိုင်တာမို့ ပစ္စည်းတွေကို အချိန်ယူပြီး ကြိုတင်စုဖြစ်ပါတယ်၊ အုတ်ခဲအဟောင်းတွေ စ စုဖြစ်တယ်၊
အုတ်ခဲအဟောင်းတွေက အရင်ခေတ်က အုတ်တွေဆိုတော့ အခုခေတ်အုတ်တွေထက်စာရင် အရွယ်အစား ပိုကြီးတယ်၊ ပိုပြီးလည်း မာတယ်၊ ပစ်ချရင်တောင် မကျိုးဘူး၊ အဲဒါတွေရဖို့ အိမ်အဟောင်းဖျက်နေတဲ့နေရာတွေဆီ ရှာပြီးသွားရတယ်၊ သယ်ယူရတဲ့စရိတ်က အုတ်တန်ဖိုးလောက်နီးနီး ကြီးနေလို့ ဖျက်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ဖျက်တဲ့သူတွေက ဝယ်တဲ့သူဆီကို တခါတည်း လက်လွှဲရောင်းလေ့ရှိကြတယ်၊ အဲဒါကြောင့် တနေရာရာမှာ အိမ်အဟောင်းတခု အိမ်ကောင်းကောင်းတခု ဖျက်နေပြီကြားရင် ရောက်အောင် သွားရတာပဲ၊ နေရာအစုံက ဝယ်ထားတဲ့ အုတ်တွေဆိုတော့လည်း အမျိုးကိုစုံနေတာပေါ့၊ အိမ်အဟောင်း တိုက်အဟောင်း ဖျက်တုံးက အုတ်တွေ၊ ရန်ကင်းက တိုက်ခန်းတွေဖျက်တုံးက အုတ်တွေ၊ မစ္စတာဂစ်တာ ဖျက်တုံးက အုတ်တွေ၊ ကျောက်တံတားရဲစခန်း ဖျက်တုံးက အုတ်တွေတောင် ပါတယ်၊ မျိုးစုံပါပဲ၊ အုတ်အမျိုး နှစ်ဆယ်လောက် တောင်ရှိမယ်ထင်တယ်၊
တံခါးပေါက် ပြတင်းပေါက်အဟောင်းတွေ၊ လှေကားအဟောင်းတွေ သစ်သားအဟောင်းတွေလည်း လိုက်ရှာ စု ရတယ်၊ ၊ တခါတလေ ကိုယ်လိုချင်နေတဲ့ အခင်းပြားအဟောင်းတွေဆို တော်တော်နဲ့ကို မရနိုင်ဘူး၊ ဟိုအရင်အိမ်တွေရဲ့ တံခါးပေါက် ပြတင်းပေါက် တွေက သိပ်ကောင်းတယ်၊ သစ်တွေက ရာသီဥတုဒဏ် ခံပြီးဖြစ်လို့ ကျုံ့တာ ကြွတာ သက်သာတယ်၊ သက်တမ်းပြည့်တယ်၊ ဆိုဒ်ပြည့်တယ်၊ အနာအဆာလေးတွေ ပါတာတော့ ရှိတယ်၊ သံပေါက်တွေ ပါတယ်၊ မူလီပေါက်တွေ ပါတယ်၊ အခု အိမ်မှာ သုံးထားတဲ့ မှန်တံံခါးပေါက်အမြင့်တွေဆို မူလက ဆန်ဂိုထောင် တခုရဲ့ တံခါးတွေ၊ သွပ်ပြားဟောင်းကြီးတွေနဲ့ပိတ်ထားလို့ မြင်မြင်ချင်းမှာ ကြိုက်ချင်စရာ မကောင်းဘူး၊ အခု အဲ့ဒီတံခါးတွေကို သွပ်ပြားတွေဖြုတ်ပြီး မှန်တွေ ပြန်တပ်ထားတာ၊ အိမ်က သစ်သားလှေကားကြီးဆိုလည်း မြို့ထဲက ဘဏ်အဆောက်အဦ တခုကတဲ့၊ အကျော်အနင်းတွေက ကောင်းလွန်းလို့ အဲဒီ့ လှေကားကို နင်းရတာ တက်ရတာ လက်ရမ်းကိုင်ရတာတွေ သိပ်အဆင်ပြေတယ်၊ အရင်က လူတွေရဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကို ဂရုတစိုက်လုပ်တာ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် စေတနာထားတာတွေကိုလည်း လေးစားမိတယ်၊
အမိုးပြားအဟောင်း၊ ကြွေပြားကျောက်ပြားအဟောင်းတွေလည်း စုရတယ်၊ ပထမတော့ တော်တော်ရှာယူရတာပေါ့၊ နောက်တော့လည်း အဆက်အသွယ်တွေရပြီး အဆင်ပြေသွားတယ်၊ အခု မိုးထားတဲ့ အမိုးပြားတွေဆို ၁၈၆၀ တဝိုက်က လုပ်ထားတဲ့အမိုးပြားတွေ၊ အနောက်တိုင်းသားတွေက အိန္ဒိယမှာ စက်ရုံတည်ပြီး မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယ အတွက် ထုတ်တာလို့ ကြားဖူးတယ်၊ သူက မြေကြီးနဲ့ ဖုတ်ထားတာဆိုတော့ ပေါ့တယ်၊ အိမ်ကို အေးစေတယ်၊ ဈေးလည်း သက်သာတယ်၊ အမိုးပြားပေါ်က တံဆိပ်တွေဆို တချို့က ဘုရင့်ခေါင်းပုံ၊တချို့က ကြာပန်း၊ တချို့က ထီးတံဆိပ်တွေ၊ နေရောင်ပေါက်တဲ့ ဖန်အကြည်အမိုးပြားလေးတွေဆို သြစတြီးယားက လုပ်တာ၊ ကြမ်းခင်းပြားတွေဆိုရင်လည်း အခု လိုက်ရှာရခက်တဲ့ မြေကြီးနဲ့ ဖုတ်ထားတာတွေ၊ အနာလေးတွေတော့ ပါတာပေါ့၊အပဲ့လေးတွေလည်း ပါတယ်၊ အဲ့လို အနာပါတာလေးတွေကို စုခင်းလိုက်တော့လည်း တမျိုးလှနေပြန်ရော၊ တချို့ ထက်ပိုင်းကွဲလေးတွေဆို ပြန်ဆက်ပြီးတောင် ခင်းထားသေးတယ်၊
နောက်ပြီး သံပန်းပြားအဟာင်းတွေလဲ ဝရံတာမှာကာဖို့ ရှာရတယ်၊ ဒေါင်းပုံတွေ ပန်းတွေ ကနုတ်တွေနဲ့ တော်တော် လှပါ့၊ မီးစလောင်းအဟောင်းတွေဆိုလည်း ရှာရတာတော်တော်ခက်တယ်၊ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှ မရှိတာ၊ ဟော်တယ်တခု ပြင်တာနဲ့ ကြုံကြိုက်လို့တော့ အဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေ ရလိုက်သေးတယ်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာ ပြန်အသုံးတည့်လောက်တဲ့ ပစ္စည်းအဟောင်းတွေဆို စု ထားရတာပဲ၊
အဲ့လိုပစ္စည်းတွေ စုရင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အိမ်ပုံကိုလည်း စဉ်းစားစိတ်ကူးရင်းပေါ့၊ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကို ဘယ်လိုပုံမျိုးလိုချင်လဲ၊ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ မှန်များများ လေးထောင့်ကျကျပုံမျိုးလား၊ အဆောင်ဆောင် အခန်းခန်းနဲ့ ခမ်းခမ်းနားနားလား၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့လား၊ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း ဘာပုံရယ်လို့ကို ဦးမတည်တော့ပဲ ကိုယ့်ရေမြေသဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် စွမ်းအင်သုံးစွဲတာတွေကို ချွေတာနိုင်မယ့် အိမ်မျိုးပဲဆောက်မယ်လို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်၊ အဓိက ကတော့ မြန်မာပြည်ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီမယ့် Tropical အိမ်မျိုးပေါ့၊ ဟိုအရင်က မြန်မာတွေနေတဲ့ အိမ်လိုမျိုး၊ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း၊ လေဝင်လေထွက် ကောင်းကောင်း၊ ပိတ်ထားတဲ့အိမ်မျိုးမဟုတ်ပဲ ပွင့်နေတဲ့အိမ်မျိုး၊ အဲဒီလိုအိမ်မျိုးဖြစ်ဖို့ကိုပဲ ဦးတည် ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးမှ ရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကို သင့်တော်သလို နေရာချတော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်၊
ကျနော်တို့က အိမ်အပြင်ပုံထက် အိမ်မှာ ကိုယ်နေချင်တာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်လုပ်နိုင်ဖို့ ပိုအလေးထားတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် အိမ်ပုံအသေးစိတ်မဆွဲခင် မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် တနေ့တနေ့ အိမ်မှာ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲ ဆိုတာတွေကို အရင် ချရေးကြည့်တယ်၊ မနက် ၅:၃၀ အိပ်ယာက ထမယ်၊ မျက်နှာသစ်မယ်၊ ခြံထဲဆင်းမယ်၊ လမ်းနည်းနည်းလျှောက်မယ်၊ သစ်ပင်တွေ ရေလောင်းမယ်၊ မနက် ၇:၀၀ နာရီ မနက်စာ စားမယ်၊ ဘာစားမှာလဲ၊ ချက်စားမှာလား၊ ဝယ်စားမှာလား၊ ဘယ်နေရာမှာ စားချင်တာလဲ၊ အိမ်ထဲမှာလား၊ အပြင်မှာလား၊ သီချင်းနားထောင်ချင်လား၊ ငှက်သံလေးတွေ ကြားချင်လား၊
ပြီးရင် ခန သတင်းစာဖတ်မယ်၊ သတင်းကြည့်မယ်၊ ပြီးရင် ပုံဆွဲမယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဆွဲချင်လဲ၊ အခန်းထဲမှာလား၊ စတူဒီယိုထဲမှာလား၊ စတူဒီယိုဆိုရင် ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ် လိုချင်လဲ၊ ပုံဆွဲနေရင်းရော တီဗီ ကြည့်ချင်လား၊ သီချင်း နားထောင်ချင်လား၊နေ့လည် တရေးအိပ်မယ်၊ ဘယ်မှာအိပ်မှာလဲ၊ အခန်းထဲမှာလား၊ ဝရံတာက ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာလား၊ နိုးရင် စာဖတ်မယ်၊ စာကို ဘယ်မှာ ဖတ်ချင်လဲ၊ လေတိုက်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖတ်ချင်လား၊ ပန်ကာ နဲ့လား၊ သီချင်းသံရော ကြားချင်လား၊
ညနေ ကားနဲ့ မြို့ထဲထွက်မယ်၊ည ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၊အဲလို ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေ ချရေးလိုက်တော့ ကိုယ် တနေ့တနေ့ ဘယ်နေရာမှာ အချိန်ကုန်မယ်၊ ဘယ်အခန်းတွေ လိုတယ်၊ ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ် လိုတယ်၊ ဘယ်အခန်းတွေတော့ မလိုဘူးဆိုတာတွေ ပေါ်လာတယ်၊ တချို့အိမ်တွေဆို ဝရံတာလုပ်ထားပြီး တလ တခါ မထွက်ဖြစ်တာ တွေ့ဖူးမှာပါ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ အဲ့လို ပိုနေမယ့်နေရာတွေ လျော့သွားတာပေါ့၊ ကိုယ်တကယ်သုံးမယ့် အသုံးဝင်တဲ့ နေရာလေးတွေ ပိုရလာတာပေါ့၊ ဒီအကြံလေးကို ကျနော့်မိတ်ဆွေ ကိုလှသောင်းက ပေးတာပါ၊ တခြား အရေးကြီးတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေလည်း ရပါသေးတယ်၊
အဲလို ချရေးပြီးမှ ကိုယ်အိမ်ဆောက်မယ့်မြေရဲ့အနေအထား၊ အနိမ့်အမြင့်၊ အကျဉ်းအကျယ် ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး အိမ်ရဲ့ပုံကို စ ဆွဲတယ်၊ အခန်းတွေ စ ဖွဲ့တယ်၊ အခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်း အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရဖို့၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့ ထပ်စဉ်းစားပြီး ပြတင်းပေါက်တွေ တံခါးတွေ ကို အကြမ်းမျဉ်းနေရာချတယ်၊ ကိုယ့်မှရှိထား စုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ နေရာချရတာဆိုတော့ အားလုံး ကွက်တိကျဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ လိုတာ ပိုတာတွေအတွက် တကယ်ဆောက်တော့မှပဲ ဖြတ်တောက် ပြင်ဆင်တော့မယ်လို့ မှန်းထားလိုက်တယ်၊ အချိန်ယူ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး အိမ်ပုံစံကို စိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုမှ အင်ဂျင်နီယာကို အပ်လိုက်တယ်၊ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နိုင်တာတွေ ညှိုနှိုင်းပြီး အိမ်စဆောက်ဖို့ လုပ်ပါတယ်၊
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အိမ်မဆောက်ခင် စဉ်းစားထားတာက..
အိမ်ဆောက်ရင် ဆောက်တဲ့သူနဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ မပြေမလည်ဖြစ်တတ်ကြတယ်၊ တချို့ဆို မခေါ်နိုင် မပြောနိုင်တောင် ဖြစ်ကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်၊ ငါတို့ အိမ်ဆောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေလည်း မထော်ချင်ဘူး၊ မျက်ထောင့်တွေလည်း မနီချင်ဘူး၊ စူပုတ်စောင်းမြောင်းတာတွေလည်း မလုပ်ချင်ဘူး၊ အဲတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရန်မဖြစ်ဘူး၊ နှုတ်ခမ်းမထော်ဘူး၊သာယာတဲ့ အိမ်ကလေးဖြစ်အောင်ဆောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော ဒီလိုအိမ်ဖြစ်အောင် ဆောက်ပေးနေတဲ့သူတွေရော စိတ်ညစ် စိတ်ဆင်းရဲနေရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး၊ အလေအလွင့်တွေကိုလည်း သိပ်ဂရုမစိုက်နဲ့၊ လိုက် စိစစ်နေရင် ထူးတာကနည်းနည်း ပူရပင်ရတာကများများ ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း ပျော်အောင်နေမယ်၊ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ပျော်အောင်ထားမယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်၊
ကျနော်တို့ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးအကြောင်း (၁)
ကျနော်တို့ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးအကြောင်း (၂)
က်ေနာ္တို႔လည္း အဲ့ဒီ့အေၾကာင္းေလးသိရေတာ့ ကိုယ္ေနမယ့္ အိမ္ေလးကို အဲ့လိုျဖစ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔ ေတြးမိၿပီး ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က အိမ္ေဆာက္ရင္လည္း ပစၥည္းအေဟာင္းေတြပဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သံုးမယ္လို႔ စဥ္းစားထားခဲ့တယ္၊ ျပတင္းေပါက္အေဟာင္းေတြ၊ တံခါးအေဟာင္းေတြ၊ သစ္သားအေဟာင္းေတြသံုးေတာ့ အိမ္ေတြ ထပ္ထပ္ေဆာက္တိုင္း သံုးမယ့္သစ္ေတြအတြက္ သစ္ပင္ေတြ ထပ္ခုတ္စရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့၊ အုတ္အေဟာင္းေတြ၊ ေက်ာက္ျပား ေႂကြျပားအေဟာင္းေတြသံုးေတာ့ အသစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္မယ့္ ေလာင္စာေတြ ေခၽြတာရာ ေရာက္တာေပါ့၊ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အနီးအနားပါတ္ဝန္းက်င္ကရတဲ့ ပစၥည္းေတြ သံုးေတာ့ အေဝးႏိုင္ငံျခားက တင္သြင္းတဲ့ပစၥည္းေတြထက္စာရင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ေလာင္စာေတြ ပိုသက္သာတာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ပစၥည္းအေဟာင္းေတြပဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သံုးမယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ၊
သံုးၿပီးသားပစၥည္းအေဟာင္းေတြနဲ႔ အိမ္ေဆာက္မယ္ဆိုေတာ့ ဒီပစၥည္းေတြက လိုခ်င္တိုင္းဝယ္လို႔မရဘဲ ၾကံဳႀကိဳက္မွသာ ရႏိုင္တာမို႔ ပစၥည္းေတြကို အခ်ိန္ယူၿပီး ႀကိဳတင္စုျဖစ္ပါတယ္၊ အုတ္ခဲအေဟာင္းေတြ စ စုျဖစ္တယ္၊
အုတ္ခဲအေဟာင္းေတြက အရင္ေခတ္က အုတ္ေတြဆိုေတာ့ အခုေခတ္အုတ္ေတြထက္စာရင္ အ႐ြယ္အစား ပိုႀကီးတယ္၊ ပိုၿပီးလည္း မာတယ္၊ ပစ္ခ်ရင္ေတာင္ မက်ိဳးဘူး၊ အဲဒါေတြရဖို႔ အိမ္အေဟာင္းဖ်က္ေနတဲ့ေနရာေတြဆီ ရွာၿပီးသြားရတယ္၊ သယ္ယူရတဲ့စရိတ္က အုတ္တန္ဖိုးေလာက္နီးနီး ႀကီးေနလို႔ ဖ်က္ၿပီးတာနဲ႔ အိမ္ဖ်က္တဲ့သူေတြက ဝယ္တဲ့သူဆီကို တခါတည္း လက္လႊဲေရာင္းေလ့ရွိၾကတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ တေနရာရာမွာ အိမ္အေဟာင္းတခု အိမ္ေကာင္းေကာင္းတခု ဖ်က္ေနၿပီၾကားရင္ ေရာက္ေအာင္ သြားရတာပဲ၊ ေနရာအစံုက ဝယ္ထားတဲ့ အုတ္ေတြဆိုေတာ့လည္း အမ်ိဳးကိုစံုေနတာေပါ့၊ အိမ္အေဟာင္း တိုက္အေဟာင္း ဖ်က္တံုးက အုတ္ေတြ၊ ရန္ကင္းက တိုက္ခန္းေတြဖ်က္တုံးက အုတ္ေတြ၊ မစၥတာဂစ္တာ ဖ်က္တုံုးက အုတ္ေတြ၊ ေက်ာက္တံတားရဲစခန္း ဖ်က္တံုးက အုတ္ေတြေတာင္ ပါတယ္၊ မ်ိဳးစံုပါပဲ၊ အုတ္အမ်ိဳး ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ေတာင္႐ွိမယ္ထင္တယ္၊
တံခါးေပါက္ ျပတင္းေပါက္အေဟာင္းေတြ၊ ေလွကားအေဟာင္းေတြ သစ္သားအေဟာင္းေတြလည္း လိုက္႐ွာ စု ရတယ္၊ ၊ တခါတေလ ကိုယ္လိုခ်င္ေနတဲ့ အခင္းျပားအေဟာင္းေတြဆို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ကို မရႏိုင္ဘူး၊ ဟိုအရင္အိမ္ေတြရဲ႕ တံခါးေပါက္ ျပတင္းေပါက္ ေတြက သိပ္ေကာင္းတယ္၊ သစ္ေတြက ရာသီဥတုဒဏ္ ခံၿပီးျဖစ္လို႔ က်ံဳ႕တာ ႂကြတာ သက္သာတယ္၊ သက္တမ္းျပည့္တယ္၊ ဆိုဒ္ျပည့္တယ္၊ အနာအဆာေလးေတြ ပါတာေတာ့ ရွိတယ္၊ သံေပါက္ေတြ ပါတယ္၊ မူလီေပါက္ေတြ ပါတယ္၊ အခု အိမ္မွာ သံုးထားတဲ့ မွန္တံံခါးေပါက္အျမင့္ေတြဆို မူလက ဆန္ဂိုေထာင္ တခုရဲ႕ တံခါးေတြ၊ သြပ္ျပားေဟာင္းႀကီးေတြနဲ႔ပိတ္ထားလို႔ ျမင္ျမင္ခ်င္းမွာ ႀကိဳက္ခ်င္စရာ မေကာင္းဘူး၊ အခု အဲ့ဒီတံခါးေတြကို သြပ္ျပားေတြျဖဳတ္ၿပီး မွန္ေတြ ျပန္တပ္ထားတာ၊ အိမ္က သစ္သားေလွကားႀကီးဆိုလည္း ၿမိဳ႕ထဲက ဘဏ္အေဆာက္အဦ တခုကတဲ့၊ အေက်ာ္အနင္းေတြက ေကာင္းလြန္းလို႔ အဲဒီ့ ေလွကားကို နင္းရတာ တက္ရတာ လက္ရမ္းကိုင္ရတာေတြ သိပ္အဆင္ေျပတယ္၊ အရင္က လူေတြရဲ႕ ကိုယ့္အလုပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္လုပ္တာ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ ေစတနာထားတာေတြကိုလည္း ေလးစားမိတယ္၊
အမိုးျပားအေဟာင္း၊ ေႂကြျပားေက်ာက္ျပားအေဟာင္းေတြလည္း စုရတယ္၊ ပထမေတာ့ ေတာ္ေတာ္႐ွာယူရတာေပါ့၊ ေနာက္ေတာ့လည္း အဆက္အသြယ္ေတြရၿပီး အဆင္ေျပသြားတယ္၊ အခု မိုးထားတဲ့ အမိုးျပားေတြဆို ၁၈၆၀ တဝိုက္က လုပ္ထားတဲ့အမိုးျပားေတြ၊ အေနာက္တိုင္းသားေတြက အိႏၵိယမွာ စက္႐ုံတည္ၿပီး ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယ အတြက္ ထုတ္တာလို႔ ၾကားဖူးတယ္၊ သူက ေျမႀကီးနဲ႔ ဖုတ္ထားတာဆိုေတာ့ ေပါ့တယ္၊ အိမ္ကို ေအးေစတယ္၊ ေဈးလည္း သက္သာတယ္၊ အမိုးျပားေပၚက တံဆိပ္ေတြဆို တခ်ိဳ႕က ဘုရင့္ေခါင္းပံု၊တခ်ိဳ႕က ၾကာပန္း၊ တခ်ိဳ႕က ထီးတံဆိပ္ေတြ၊ ေနေရာင္ေပါက္တဲ့ ဖန္အၾကည္အမိုးျပားေလးေတြဆို ၾသစႀတီးယားက လုပ္တာ၊ ၾကမ္းခင္းျပားေတြဆိုရင္လည္း အခု လိုက္ရွာရခက္တဲ့ ေျမႀကီးနဲ႔ ဖုတ္ထားတာေတြ၊ အနာေလးေတြေတာ့ ပါတာေပါ့၊အပဲ့ေလးေတြလည္း ပါတယ္၊ အဲ့လို အနာပါတာေလးေတြကို စုခင္းလိုက္ေတာ့လည္း တမ်ိဳးလွေနျပန္ေရာ၊ တခ်ိဳ႕ ထက္ပိုင္းကြဲေလးေတြဆို ျပန္ဆက္ၿပီးေတာင္ ခင္းထားေသးတယ္၊
အဲ့လိုပစၥည္းေတြ စုရင္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အိမ္ပံုကိုလည္း စဥ္းစားစိတ္ကူးရင္းေပါ့၊ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ကို ဘယ္လိုပံုမ်ိဳးလိုခ်င္လဲ၊ အခု ေခတ္စားေနတဲ့ မွန္မ်ားမ်ား ေလးေထာင့္က်က်ပံုမ်ိဳးလား၊ အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းနဲ႔ ခမ္းခမ္းနားနားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္လံုးႀကီးေတြနဲ႔လား၊ စဥ္းစားရင္း စဥ္းစားရင္း ဘာပံုရယ္လို႔ကို ဦးမတည္ေတာ့ပဲ ကိုယ့္ေရေျမသဘာဝနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲတာေတြကို ေခၽြတာႏိုင္မယ့္ အိမ္မ်ိဳးပဲေဆာက္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္၊ အဓိက ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရာသီဥတုနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ Tropical အိမ္မ်ိဳးေပါ့၊ ဟိုအရင္က ျမန္မာေတြေနတဲ့ အိမ္လိုမ်ိဳး၊ အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္း၊ ပိတ္ထားတဲ့အိမ္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ပြင့္ေနတဲ့အိမ္မ်ိဳး၊ အဲဒီလိုအိမ္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ကိုပဲ ဦးတည္ ထားလိုက္တယ္၊ ၿပီးမွ ရွိထားတဲ့ ပစၥည္းအေဟာင္းေတြကို သင့္ေတာ္သလို ေနရာခ်ေတာ့မယ္လို႔ စဥ္းစားလိုက္တယ္၊
က်ေနာ္တို႔က အိမ္အျပင္ပံုထက္ အိမ္မွာ ကိုယ္ေနခ်င္တာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြကို သက္ေတာင့္သက္သာ ေနႏိုင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ပိုအေလးထားတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အိမ္ပံုအေသးစိတ္မဆြဲခင္ မိုးလင္းကေန မိုးခ်ဳပ္ တေန႔တေန႔ အိမ္မွာ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္လဲ ဆိုတာေတြကို အရင္ ခ်ေရးၾကည့္တယ္၊ မနက္ ၅:၃၀ အိပ္ယာက ထမယ္၊ မ်က္ႏွာသစ္မယ္၊ ျခံထဲဆင္းမယ္၊ လမ္းနည္းနည္းေလွ်ာက္မယ္၊ သစ္ပင္ေတြ ေရေလာင္းမယ္၊ မနက္ ၇:၀၀ နာရီ မနက္စာ စားမယ္၊ ဘာစားမွာလဲ၊ ခ်က္စားမွာလား၊ ဝယ္စားမွာလား၊ ဘယ္ေနရာမွာ စားခ်င္တာလဲ၊ အိမ္ထဲမွာလား၊ အျပင္မွာလား၊ သီခ်င္းနားေထာင္ခ်င္လား၊ ငွက္သံေလးေတြ ၾကားခ်င္လား၊
ၿပီးရင္ ခန သတင္းစာဖတ္မယ္၊ သတင္းၾကည့္မယ္၊ ၿပီးရင္ ပံုဆြဲမယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဆြဲခ်င္လဲ၊ အခန္းထဲမွာလား၊ စတူဒီယိုထဲမွာလား၊ စတူဒီယိုဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္က်ယ္ လိုခ်င္လဲ၊ ပံုဆြဲေနရင္းေရာ တီဗီ ၾကည့္ခ်င္လား၊ သီခ်င္း နားေထာင္ခ်င္လား၊ေန႔လည္ တေရးအိပ္မယ္၊ ဘယ္မွာအိပ္မွာလဲ၊ အခန္းထဲမွာလား၊ ဝရံတာက ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာလား၊ ႏိုးရင္ စာဖတ္မယ္၊ စာကို ဘယ္မွာ ဖတ္ခ်င္လဲ၊ ေလတိုက္တဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ဖတ္ခ်င္လား၊ ပန္ကာ နဲ႔လား၊ သီခ်င္းသံေရာ ၾကားခ်င္လား၊
ညေန ကားနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲထြက္မယ္၊ည ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္မယ္၊အဲလို ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေလးေတြ ခ်ေရးလိုက္ေတာ့ ကိုယ္ တေန႔တေန႔ ဘယ္ေနရာမွာ အခ်ိန္ကုန္မယ္၊ ဘယ္အခန္းေတြ လိုတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္က်ယ္ လိုတယ္၊ ဘယ္အခန္းေတြေတာ့ မလိုဘူးဆိုတာေတြ ေပၚလာတယ္၊ တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြဆို ဝရံတာလုပ္ထားၿပီး တလ တခါ မထြက္ျဖစ္တာ ေတြ႕ဖူးမွာပါ၊ ကိုယ့္အိမ္မွာ အဲ့လို ပိုေနမယ့္ေနရာေတြ ေလ်ာ့သြားတာေပါ့၊ ကိုယ္တကယ္သံုးမယ့္ အသံုးဝင္တဲ့ ေနရာေလးေတြ ပိုရလာတာေပါ့၊ ဒီအၾကံေလးကို က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ကိုလွေသာင္းက ေပးတာပါ၊ တျခား အေရးႀကီးတဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတြလည္း ရပါေသးတယ္၊
က်ေနာ္တို႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေလးအေၾကာင္း (၁)
က်ေနာ္တို႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ေလးအေၾကာင္း (၂)
ဘီကီနီ နဲ့ အတွင်းသား ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ နန်းမွေစံ….
အိမ်ယာထက်က Lလစ်ရှားရဲ့ ရွှေရင်မွှာ ပုံရိပ်လေးများ……
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက် တန်တန်ရရှိခဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ပရိတ်သက်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာများ….
ပိုကြမ်းတာ တွေ တင်ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
ဘယ်သူ့အတွက် မှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားတာ ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်..
မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ အမြန်ပြီးပါတော့ လို့ငိုနေရှာတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းရင်း သူမရဲ့ခံစားချက်တွေ ကိုပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်..
အိမ်ကနေအိမ် အပြင်ကို မထွက်ဘဲ အခုချိန်ခါမှာ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ် နဲ့အိမ်မှာ နှစ်ပတ်လောက် နေပေးကြဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ နီနီခင်ဇော်…
ယူတို့ မေတ္တာ ကြောင့် နေပြန်ကောင်း သလောက်ဖြစ်နေပြီ❤️🥰 ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
အနံ့ရော အရသာ တွေပါပျောက် ပြီး ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်နေတာ (၄) ရက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်…..
စေတနာ ကောင်းတော့ ရုပ်ကလေးကလည်း လှပနေပြီး လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် မိုးကာ တွေ လှူဒါန်းပေး ခဲ့တဲ့ “ခင်သဇင်”….